बिहानको खाना नखाँदा मस्तिष्कमा असर ! - नेपाल समय
बिहानको खाना नखाँदा मस्तिष्कमा असर !
मस्तिष्क प्रकृतिले मानव जातिलाई दिएको एक अनुपम उपहार हो । मस्तिष्ककै कारण मानिस सर्वश्रेष्ठ जीव हो । मस्तिष्ककै अरनखटनमा मानिसले अकल्पनीय काम पनि गरेका छन् ।
यो एकदमै संवेदनशील अंगले मानिसको जीवनलाई अघि बढाएको हुन्छ । मानिसको हरेक कामका दिन निर्देशन दिने काम मस्तिष्कले नै गर्दछ । त्यसैले मस्तिष्कलाई उचित आराम, स्याहार र रिफ्रेस गर्नु जरुरी छ ।
मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्न ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू :
सन्तुलित भोजन मस्तिष्कका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । नियमित रुपमा खाना नखाने मानिसमा मस्तिष्कसँग सम्बन्धित धेरै समस्या आउने गर्दछ । त्यसैले खानालाई नियमित रुपमा खानुपर्छ ।
त्यसमा पनि बिहानको खाना सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । बेलुकाको खानापछि बिहानीको खाना समयमै नखाए शरीरमा सुगरको लेभल कम हुन्छ । जसको असर दिमागमा पर्दछ । त्यसैले कलेज पढ्ने विद्यार्थी तथा महिलाहरुलाई बिहान समयमै खाना खान चिकित्सकहरुले सुझाव दिन्छन् ।
गर्मीको कारणले पनि दिमागमा असर पर्छ । लामो समय एउटै वातावरणमा बसिरहदाँ उकुसमुकुस महसुस हुने गर्छ । गर्मीको छट्पटिमा दिमागले काम गर्न सक्दैन । दिमागलाई धेरै अक्सिजनको आवश्यक्ता हुन्छ र यसको कमीमा रक्त सञ्चारमा समस्या हुन्छ । फ्रेस नभएको अवस्थामा दिमागले सोच्न सक्दैन भने शरीर आलस्य हुन्छ ।
हावा शरीरका लागि अत्यावश्यक वस्तु हो । सफा वातावरण मस्तिष्कका लागि फाइदाजनक भएपनि प्रदुषित वातावरण घातक हो । प्रदूषित क्षेत्रमा बहने हावामा धेरै किसिमका रसायनिक तत्व मिसिने भएकाले यसले दिमागलाई राम्ररी काम गर्न दिँदैनन र मस्तिष्कमा नकारात्मक असर पर्छ ।
निन्द्र शारिरीक र मानसिक दुवै हिसाबले महत्वपूर्ण हुन्छ । राम्रो निन्द्रा नपुग्नाले हाम्रो दिमागलाई ठूलो असर पार्छ । औसतमा स्वस्थ मानिसलाई दैनिक पाँचदेखि ६ घण्टाको निन्द्रा आवश्यक छ । एक रातको निन्द्राले सात दिन हानी गर्ने सामाजिक मान्यता पनि छ । त्यस्तै सुत्दा मुख छोप्न नहुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
मुख छोपेर सुत्दा हाम्रो शरीरबाट निस्किको ‘कार्बनडाई अक्साइड’ बाहिर नजाने र अक्सिजनको कमी हुने भएकाले शरीर र दिमाग दुवैतर्फ असर पुर्‍याउँछ ।
धुमपान र मध्यपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हो । धुमपान र मध्यपानले दिमागलाई सुस्त बनाइ सोच्न सक्ने क्षमता घटाउँछ । त्यस्तै अत्यधिक सुगरको सेवनले पनि मस्तिष्कमा असर गर्छ ।
मस्तिष्कलाई स्वस्थ बनाउन व्यायामको जरुरी पर्छ । मस्तिष्कका लागि गरिने व्यायाम भनेको सकारात्मक सोच हो । सकारात्मक सोचका कारण शरीरमा उर्जा बढ्नुका साथै सोच्ने शक्तिको पनि विकास गर्दछ ।
तर, एक्लोपन भने मानिसका लागि दुस्मन हो । समूहमा बसेर सिर्जनात्मक काम गर्ने मानिसको मानसिक रुपमा स्वस्थ रहन्छ ।